म्यूजिक भिडिओमा करोडौंको लगानी बालुवामा पानी - Entertainment Khabar
म्यूजिक भिडिओमा करोडौंको लगानी बालुवामा पानी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०७७ समय: १५:०५:११
काठमाडौं। गायक भागिरथ चलाउनेले ‘ज्यानको माया लाएछ’ बोलको तीज गीत ल्याए। गायिका पुनम थापाले साथ दिएको गीतलाई युट्युबमा ३० हजार बढीले हेरेका छन्। अहिलेको चल्तीकी मोडल अञ्जली अधिकारीलाई फिचरिङ गराइएको भिडिओलाई दर्शकले रूचाएनन्।
८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर बनाएको भिडिओबाट चलाउनेले पैसा पाउन आशा गरेका छैनन्। “यो वर्षको पहिलो भिडिओ हो। गीत राम्रोसँग चलेन। ८० हजार खर्च गरिएको थियो। सबै डुब्यो”, गायक चलाउनेले देखापढीसँग भने। चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का फिचर्ड रहेको एउटा म्यूजिक भिडिओले एक लाख पनि भ्यूज पाएन। अनिल केसीको आधुनिक गीत ‘मस्तै मस्तै’ सनिष श्रेष्ठ र निलिमा थापा मगरले गाएका छन्। एक लाख भन्दा बढीको तयार भएको यो भिडिओले युट्युबमार्फत धेरै कमाउने आश नगरेको अनिल बताउँछन्।
रिता सिमखडा दाहालले यो वर्ष नायिका केकी अधिकारी र पुष्प खड्कालाई फिचर्ड गरेर आधुनिक गीत ल्याएकी छिन्। गायिका अस्मिता अधिकारी र पुरुषत्तोम सुवेदीले गाएको ‘मायाको घरबार’ ले २५ हजार भ्यूज पाएको छ। रिताले यसलाई पैसा कमाउने बाटो भन्दा पनि रहर भएको बताइन्।
अमृत क्षेत्रीले मेलिना राईसँगको सहकार्यमा रहेको परदेशीको पीडामा आधारित रहेर आधुनिक गीत ल्याएका छन्। चलचित्र क्षेत्रका चर्चित अभिनेता दयाहाङ राईलाई अभिनय गराइएको भिडिओले पनि राम्रो भ्यूज पाउन सकेन्। एक लाख रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको यो भिडिओले न दयाहाङलाई चिन्न सक्यो न त चर्चित गायिका मेलिना राईको सम्मान गर्न सक्यो।
बढी भ्यूजका लागि दया, मेलिना, अमृत लगायतले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शेयर गरे। तर, चर्चामा आउन सकेन्। गायक अमृत यो गीतले धेरै चर्चा नपाएपनि थप हौसला पैदा गरेको बताउँछन्। २० हजार भन्दा बढी आफ्नो पारिश्रमिक तोकेका राजेन्द्र नेपाली ‘लट्टे’, यादव देवकोटा ‘सरापे’, लगायतका कलकारलाई फिचर्ड गरिएको केही भिडिओको भ्यूज हेर्दा दयनीय अवस्था छ। नाम चलेको कलाकारलाई भिडिओमा खेलाउँदा चलिहाल्छ भन्ने मानसिकताका कारण यो प्रवृति बढेको छ।
बेला बेला चर्चामा आउने गायिका प्रिती आलेले गाएको तथा ज्योती मगरले मोडलिङ गरेको तीज गीत ‘गिलास ठोक्काउने’ विवादमा तानियो। यो गीतमा राम्रो भन्दा नराम्रो प्रतिक्रिया बढी छन्।
महंगो पारिश्रमिक दिँदा लागत बढ्यो
केही कलाकारले एउटै भिडिओको लागि एक लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक लिन्छन्। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सागर लम्साल ‘बले’, नाजिर हुसेन, आँचल शर्मा, केकी अधिकारी, पल शाह लगायतका कलाकारहरूको रेट नै एक लाख बढी छ। बलेले एउटा भिडिओका लागि एक लाख रूपैयाँ, नाजिरले एक लाख २० हजार, आँचलले ८० हजार, पलले उक लाख २० हजार पारिश्रमिक लिन्छन्। यस हिसाबले गर्दा यी कलाकार फिचर्ड गरिएका प्राय:जसो भिडिओले राम्रै भ्यूज पाइरहेका छन्।
गायक, संगीतकार तथा गीतकार सन्तोष सुनारले २०१८ मा ल्याएको पिच रोडले झण्डै तीन करोड भ्यूज पाएको छ। सन्तोषका अनुसार उक्त गीतबाट १५ लाख बढीको आम्दानी भएको छ। औँलाले गन्न सकिने केही भिडिओबाहेक अरू सबैले न पैसा कमाउन सके न त चर्चामै आउन सकेका छन्।
युट्युबबाट कति हुन्छ कमाइ ?
पछिल्लो समय युट्युबतिर धेरैको ध्यान गएको छ। सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तार भएसँगै यसको प्रयोग बढ्दो छ। आजकल धेरैजसो गायक गायिका तथा चलचित्रकर्मीले आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेका छन्। जसमा उनीहरूले आफ्नो कन्टेन हालेर कमाइ गरिरहेका छन्।
गीत संगीत क्षेत्रमा म्यूजिक नेपालको बर्चश्व छ। ५० लाख भन्दा बढी सस्क्राइब रहेको म्यूजिक नेपाल युट्युब च्यानलले मासिक एक करोडसम्म आम्दानी गर्छ। युट्युबहरूको तथ्यांक विश्लेषण प्रयोग गरिने सोसियल ब्लेडका अनुसार नेपालका केही चर्चित च्यानलको आम्दानी मासिक एक करोडसम्म देखाउँछ।
म्यूजिक नेपालले मासिक ९ हजार डलरदेखि एक लाख ४८ हजार डलर सम्म आम्दानी गर्छ। म्यूजिक नेपालले पछिल्लो दुई महीनामा सर्वाधिक ८५ भिडिओ अपलोड गरेको छ। ब्लेडले गरेको विश्लेषणमा १० प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ने आईटी विज्ञहरूको बुझाइ छ।
किन डुबाउँछन लगानी ?
एउटा म्यूजिक भिडिओ निर्माणका लागि कम्तिमा एक लाख रूपैयाँदेखि त्यो भन्दा माथि जति पनि बढी लगानी हुन सक्छ। नेपालमा अहिलेसम्म कम्तिमा १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेर भिडिओ बनाइएको पाइन्छ। चर्चित गायक गायिकालाई गाउन लगायो भने म्यूजिककै खर्च पनि धेरै हुसक्छ। चर्चित गायिका विष्णु माझीले एउटा गीत गाए वापत एक लाख रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेकी छन्।
त्यसरी हेर्दा उनलाई गीत गाउन लगाएर र चर्चित मोडल बलेसँगै आँचललाई भिडिओमा फिचर्ड गराउँदा खर्च पाँच लाख भन्दा बढी लाग्छ। यसरी लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर भिडिओ बनाउँदा सबैले लगानी उठाउँछ भन्ने हुँदैन। गीतमा लगानी मुख्यतया त्यही गीतको व्यापारबाट उठाउने लक्ष्य नराखिने गीत संगीतबारे जानकार तथा ब्लगर दुर्गा पंगेनी बताउँछन्।
“लगानी फिर्ताका अन्य आधारहरूलाई हेरेर लगानी गरिन्छ। जस्तैः गायकहरूको हकमा गीत चल्यो भने स्टेज कार्यक्रमबाट त्यो गीतमा गरिएको लगानी फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ”, उनले भने, “गीतकारहरू आफ्नो गीतमा आफैं लगानी गर्न रूचि राख्दैनन्। त्यसका लागि अन्यबाट लगानी हुन्छ।”
उनीहरू त्यहाँबाट नाम कमाएर स्टेजबाट दाम कमाउने गरेको उनको भनाइ छ। “भिडिओबाट चर्चित भएपछि मेला, महोत्सव या विदेशतिरका स्टेज पर्फमेन्सबाट कमाई गर्ने सोंचका साथ भिडिओमा ठूलो लगानी गरिन्छ। यसमा नियमित रूपमा स्टेजमा पर्फमेन्स गर्ने कलाकारहरूले लगानी पनि गर्ने गरेको देखिन्छ”, पंगेनीले भने।
अर्कोथरी एकपटक मात्र लगानी गर्ने निश्चित स्वार्थका लागि लगानी गर्नेहरू पनि रहेको उनको भनाइ छ। उनीहरूमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने आश नहुने उनले बताए। विशेषगरी तीजका गीतहरूमा त्यस्तो प्रकारको प्रवृति देखिएको भन्दै उनले भने, “त्यो समूह आत्मसन्तुष्टि या रहर पूरा गर्नतिर मात्र लाग्छन्।”
वर्षेनी लाग्ने करोडौंको लगानीले राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा केही पनि फाइदा हुँदैन। तर, समाजलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष फाइदा भएको उनको बुझाइ छ। “त्यो लगानी बजारमा जान्छ, कास्ट एण्ड क्रु इन्गेज्ड हुन्छन्, मोडलिङ गर्नेदेखि मेकअप गर्नेसम्म र कपडा डिजाइन गर्नेदेखि लाइट, साउण्ड चलाउनेसम्मले रोजगारी पाउँछन्”, पंगेनीले भने।
राज्य नै मौन
करोडौंमा लगानी हुने तर, आम्दानी भने नहुने क्षेत्रलाई व्यस्थित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रष्ठिानका अध्यक्ष रमेश बिजी बताउँछन्। “के कारणले यत्रो लगानी गरिहेका छन्। बुझ्न सकिएको छैन। प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो”, उनले भने, “राज्यलाई धेरैपटक यसका लागि नीति नियम बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं। तर, राज्य नै बहिरो छ।”
१० अछाम जिल्ला ढकारी गाउँपालिका ६ वस्ने निकै गरिब परिवारकी १७ वर्षीया मन्सरी बुढा (स्व टेकबहादुर बुढाकी छोरी) बायाँ खुट्...
करिश्माको प्रश्न-महामारीको बेला भिडभाड गर्ने दललाई कसरी राम्रो भनुँ?’
काठमाडौं । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले राजनीतिक घटनाक्रमबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। सत्तामा रहेका दल र सत्ता बाहिर...
अभिनेत्री टिना दत्त सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । आफ्ना बोल्ड तस्विरले उनी सामाजिक सञ्जाल तताउने गर्छिन् । टिन...